Ifulethi kwiGadi Entle - I-Airbnb
Ifulethi kwiGadi Entle
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguVlatko
Ibekwe kwigadi entle apho unokuphumla kwindawo enoxolo kwaye uphumle kwindawo yasekhaya.
Kunye ne-Wi-Fi yasimahla, indawo yokupaka kunye ne-air conditioning, le ndlu inomatrasi obalaseleyo kwiibhedi ezikumgangatho wehotele.
Ifakwe kumnyango ongasempuma wesixeko, kuphela iikhilomitha ezi-5 ukusuka kuhola wendlela i-A3 i-Zagreb-Belgrade, kunye neemitha ezingama-500 kuphela ukusuka kwindlela yelizwe i-D55 iZupanja-Vinkovci-Vukovar.
I-Apartment ye-45 m2 ine-paseji, igumbi lokuhlambela elineshawa, indlu yangasese eyahlukileyo, igumbi lokuhlala nekhitshi kunye negumbi lokulala. Ixhotyiswe ngenkqubo yokufudumala ephakathi kuwo onke amagumbi kunye ne-air conditioning. Ikwanayo neFlat Screen TV enesamkeli sesathelayithi.
Igumbi lokulala linebhedi ephindwe kabini, enokwahlulwa ibe ziibhedi ezimbini ezingatshatanga kunye nayo enye ibhedi enye, ngelixa kwigumbi lokuhlala kukho ibhedi yesofa enokubekwa ukuba ilale.
Igumbi lokuhlambela libandakanya umatshini wokuhlamba ngelixa ekhitshini kukho zonke izixhobo kunye nezinto zokusika, onokuthi uzifune ukuba uhlala iintsuku ezininzi.
Idolophu encinci entle nethuleyo kumlambo waseSava otyebileyo kwimbali nakwisithethe, isixeko apho idlalwa khona ibhola okokuqala (1880) kunye nentenetya (1881) kwintsimi yaseCroatia.
Kunye negastronomy enkulu yasekhaya, kukwakhona unikezelo lweeholide ezisebenzayo njengokuhamba ecaleni komlambo iSava kunye nokuhamba ngebhayisekile kwihlathi laseSpacva apho kukho iindawo ezifanelekileyo zokuzingela nokuloba.
Umda we-Croatian-Bosnia u-2 km kude kwaye umda we-Croatian-Serbian u-40 km kude.
Le ndlu ikwimpuma yokungena esixekweni, iikhilomitha ezi-5 kuphela ukusuka kuhola wendlela i-A3 iZagreb-Belgrade, kwaye ziimitha ezingama-500 kuphela ukusuka kwindlela yelizwe i-D55 iZupanja-Vinkovci-Vukovar.
Nali ikhonkco eliya kwiofisi yokhenketho eŽupanja, apho unokufumana lonke uhlobo lolwazi oluluncedo malunga nedolophu yethu, indawo, iminyhadala, indawo ye-gastro, kunye neholide esebenzayo.
Umbuki zindwendwe ngu- Vlatko
Siyafumaneka nge-24/7 kwaye sihlala kanye kwindlu engaphambili ke siza kukunceda ngayo nayiphi na imibuzo onayo. :-)